Muhiimada Xeerka Saxaafadda JSL.W/Q: Cabdirashiid Nuur Wacays |
Muhiimada Xeerka Saxaafadda JSL.W/Q: Cabdirashiid Nuur Wacays
W/Q: Cabdirashiid Nuur Wacays
Xeerka saxaafadu waa sharci dhaqan gal ah oo kasoo baxay baarlamanka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana uu saxeexay Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, waana sharciga ugu mudan shuruucda dalka lagaga shaqeeyo marka laga hadlayo arrimaha saxaafadda. Sida ku xusan Qodobka 31aad ee xeerkani ‘xeer kasta, sharci kasta, wareegto kasta iyo amar kasta oo xeerkani khilaafsani way burayaan isla marka uu dhaqan galo. Waxaa markaasi saxaafadda loo raacayaa ama eeddaynayaa si waafaqsan xeerkani saxaafadda. Qodobka 3aad ee xeerkani ayaa xaqiijinaya xoriyadda saxaafadda iyo xuquuqda isku abaabulka ururo xirfaddeedyo leh dallad guud iyo xeer-hoosaad anshax oo mideysan. Waxa uu xeerkanani mamnuucayaa cabudhinta saxaafadda iyo wax kasta oo loo qaadan karo faaf-reeb. Guud ahaan, xeerkani waa mid xaqiijinaya xoriyadda saxaafadda, isla markaana waajibaad dusha ka saaraya saxaafadda, wax ka reebaya isla markaana sheegaya waxii ka mabnuuc ah. Sharci ahaan, xeerkani waxaa loogu talo-galay in lagu ilaasho xuquuqaha dastuuriga ah ee rayi dhiibashada, fikirka xorta ah iyo saxaafadda xorta ah. Waxaanay ujeeddadiisu tahay in la helo saxaafad xor ah oo loo sameeyey min-qiyaas lagu xakamayn karo hawl-gudashadeeda. Waxaa muhiima in la fahmo in Xeerka Saxaafaddu uu yahay xeerka u gaarka saxaafadda uguna mudan markay noqoto arrimaha saxaafadda. Xeerka saxaafadda meelna kagama xusno fal-dembiyeedka uu suxufigu galo waxaa loo raacayaa Xeerka Ciqaabta. Haseyeeshee, waxaa ku xusan in saxaafadda ku xad-gudubta faqraddaha qodobka 10aad ee Xeerka Saxaafadda (xaqiijinta wax soo saar run ah, ilaalinta sirta ciidamada, faafinta muuqaalo anshax-xumo ah iyo ceebaynta ku dhaqanka diinta islaamka IWM) loo raacayo anshaxmarinta ku xusan xeer-hoosaadka anshaxa saxaafadda iyo xeerarka madaniga ah ee dalka ee falkoodu khuseeyo. Waxaa badanaa saxaafadda lagu eeddeeyaa qodobbada Xeerka Ciqaabta, waxaana lagu sababeeyaa in Xeerka Saxaafaddu aanu dhigayn ciqaab iyo anshax-marin toona. Maxkamaddaha dalku marka dacwad saxaafaeed la horkeeno waa inay ku dhaqmaan talaabooyinkani hoos ku xusan:
Waa inay tixgelinta siyaan oo hubiyaan in dacwaddu aanay waxba u dhimayn xuquuqaha qofka iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee Dastuurku uu ilaashay.
Waa inay Maxkamaddu hubisaa xeerka Suxufiga lagu eeddaynayaa ma buuxiyey shuruuddaha ku cad Qodobka 130(5) ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland? Ma xeer kale oo ka mudan baa jira. Maaha in Xeer-ilaalinta iyo Xukumaddu ay doortaan xeerka iyo qodobka qofka qabanaya?
Waa inay Maxkamaddu ku dhaqantaa Qodobka 21aad ee Dastuurka oo ay hubisaa in aan wax loo dhimayn xuquuqaha iyo xoriyaadka uu Dastuurku dhigayo si waafaqsan bayaannada xuquuqaha aadamaha iyo xeerarka caalamiga ah ee Dastuurka ku xusan.
Haddii ay maxkamaddu u aragto in xeerka lagu eeddaynayo qofku aanu waafaqsanayn ama ka hor-imanayo Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ama aanu buuxinayn shuruuddaha ku cad Qodobka 130(5) ee Dastuurka, waa in iyadoo dabaqaysa Qodobka 15aad ee Xeerka Nidaamka Garsoorka dacwadda u gudbisaa Maxkamadda Dastuuriga ah si ay go’aan uga soo saarto.
By. Cabdirashiid Nuur Wacays